Catch Me If You Can (2002) | MM Movie Store
ဒါရိုကျတာက နာမညျကွီး Steven Spielberg ဖွဈပွီး မငျးသားတှကေတော့ မငျးသားကွီး Tom Hanks ရယျ…မငျးသားခြော Leonardo တို့ရယျ ဖွဈပါတယျ…။ဖွဈရပျမှနျဇာတျကားဖွဈသလို အျောစကာဆုတှလေဲရရှိထားတဲ့ဇာတျကားပါ။
ဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားဖွဈပါတယျ။ ပေ့ါပေ့ါပါးပါး ဖနျစီကားတဈကားဖွဈပမေယျ့ ပညာရစရာတှေ မြားသလို ကွညျ့လညျးကွညျ့သငျ့တဲ့ကားပါ။
မငျးသားနှဈယောကျဖွဈတဲ့ Leonardo နဲ့ Tom Hanks တို့နှဈဦးရဲ့ သရုပျဆောငျခကျြကလညျး ကောငျးသလို သူတို့နှဈဦးကွားက ဆကျဆံရေး၊ ဇာတျလမျး တညျးဖွတျထားပုံကလညျး ဇာတျကားကို ထူးခွားတဲ့ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈစပေါတယျ။
ဇာတျရှိနျ အတကျအကြ မှနျပွီး၊ ပါသငျ့တဲ့အခကျြအလကျ အားလုံးစုံအောငျ ထညျ့သှငျးရိုကျကူးထားနိုငျပါတယျ။ဉာဏျကောငျးရဲ့သားနဲ့ လမျးမှားရောကျနတေဲ့ လူငယျ လေးကို တာဝနျအရဖမျးတာတငျမဟုတျပဲ လမျးမှနျရောကျလာအောငျ ပွုပွငျပေးရုံသာမက
နိုငျငံအတှကျပါ အကြိုးရှိအောငျ အသုံးခြ နိုငျခဲ့တဲ့ Carl Hanratty အဖွဈ Tom Hanks ပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ပွငျသဈရဲတှေ Frank ကို ဖမျးသှားတော့ မရမက ပွနျချေါထုတျပွီး အမရေိကားကို ပွနျချေါလာနိုငျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပုံတှေ ကိုလညျး ဒီကားမှာ ခံစားကွညျ့ရှုရမှာပါ…….
IMDb Rating(8/10) Rotten Tomatoes (96%) ရရှိထားပါတယျ။
ဒါရိုက်တာက နာမည်ကြီး Steven Spielberg ဖြစ်ပြီး မင်းသားတွေကတော့ မင်းသားကြီး Tom Hanks ရယ်…မင်းသားချော Leonardo တို့ရယ် ဖြစ်ပါတယ်…။ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်သလို အော်စကာဆုတွေလဲရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ။
ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ပေ့ါပေ့ါပါးပါး ဖန်စီကားတစ်ကားဖြစ်ပေမယ့် ပညာရစရာတွေ များသလို ကြည့်လည်းကြည့်သင့်တဲ့ကားပါ။
မင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Leonardo နဲ့ Tom Hanks တို့နှစ်ဦးရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်ကလည်း ကောင်းသလို သူတို့နှစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံရေး၊ ဇာတ်လမ်း တည်းဖြတ်ထားပုံကလည်း ဇာတ်ကားကို ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်စေပါတယ်။
ဇာတ်ရှိန် အတက်အကျ မှန်ပြီး၊ ပါသင့်တဲ့အချက်အလက် အားလုံးစုံအောင် ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားနိုင်ပါတယ်။ဉာဏ်ကောင်းရဲ့သားနဲ့ လမ်းမှားရောက်နေတဲ့ လူငယ် လေးကို တာဝန်အရဖမ်းတာတင်မဟုတ်ပဲ လမ်းမှန်ရောက်လာအောင် ပြုပြင်ပေးရုံသာမက
နိုင်ငံအတွက်ပါ အကျိုးရှိအောင် အသုံးချ နိုင်ခဲ့တဲ့ Carl Hanratty အဖြစ် Tom Hanks ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်ရဲတွေ Frank ကို ဖမ်းသွားတော့ မရမက ပြန်ခေါ်ထုတ်ပြီး အမေရိကားကို ပြန်ခေါ်လာနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေ ကိုလည်း ဒီကားမှာ ခံစားကြည့်ရှုရမှာပါ…….
IMDb Rating(8/10) Rotten Tomatoes (96%) ရရှိထားပါတယ်။
9-1-1 (Season 1) ၊ အပိုငျး (၅)